HSB waxay ka sii wanaajineysaa bosparandet iyadoo bangiga ka bedelaysa Swedbank una bedelaysa Danske Bank. Markaad adigu keysaneyso lacagta hoyga waxay taasi micno kuugu fadhidaa inaad hesho shuruudo ka faa'iido badan iyo sanduuqyada saamiga hantida oo ka badan oo la kala doordooran karro.
Waxaa imminka la gaaray goortii kaydsashada/dhaqaaleedsashada aqal iibsashada [bosparande] adiga ku gaarka ah aad bangiga ka wareejin lahayd
Waxaad ka heli doontaa iimeyl HSB markii ay gaarto inaad u kala wareejiso bangiyada dhigaaladaada guriga. Tani mararka qaar waxay u dhaxayn doontaa Abriil iyo Oktoobar 2020. Waxaad heli doontaa waraaq boostada laguu soo dhigo haddii aadan hore ugu gudbin iimeylkaaga HSB.
Haddii sannadkaan 2020 aadan kaydsashada/dhaqaaleedsashada aqal iibsashada [bosparande] adiga ku gaarka aadan bangiga ka wareejin, waxaa dhici doonto in kaydsashada/dhaqaaleedsashada aad bangiga Swedbank ku leedahay, loo rogo akawnt kaydsashada/dhaqaaleedsashada oo caadi ah, waxaana islamarkaas ka lummi doono dhibcihii kaydsashada/dhaqaaleedsashada aqal iibsashada [bosparpoäng] ee adiga ku gaarka ahaa.
Talaabo talaabo, qofka haysta Mobilt BankID
1. Halkan ka bilow wareejinta ka dibna dooro ”Flytta bosparande”. Waxaad u baahan tahay inaad kombiyuutar isticmaasho.
2. Talaabada ugu horeysa waxaad macmiil ka noqon doontaa Danske Bank. Waxaad isticmaali Mobilt BankID si aad iskugu cadeyso. Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalo ay qasab tahay in bangiyada oo dhami ay dadka weydiiyaan.
3. Hab socodka, ayaad oggolaan doontaa wareejinta waxyaalahaaga keydsiga
hoygaaga, ee laga qaadaayo Swedbank lana geynaayo Danske Bank, iyo in wax/shay kaas mid la mid ah laga furo Danske Bank.
4. Hadda waxaad dooran kartaa qaabka keydsiga, inta ka baxsa kuwa lagu soo
wareejinaayo tallaabada 3. Waxaad taas sameyneysaa adigoo marka hore soo galaaya bangiga internedka ee Danske Banks , Hembanken.
5. Hadda waxaad samayn kartaa wareejin joogto ah oo ka socota bangigaaga caadiga ah si aad lacag ugu keydsato oo aad dhibco keydsiga hoyga ugu urursato.
6. Wareejinta lacagtaadu waxay qaadan doontaa 1 ilaa 4 toddobaad iyadoo ku xiran qaabka keydsiga hoyga ee aad maanta haysato. Waxaad marka lacagta la wareejiyo ee wax walbaa ay dhan yihiin heli doontaa xaqiijin emayl ahaan ah oo ka socota HSB.
Miyaad caawimo uga baahan tahay inaad wareejiso lacagta keydsiga hoygaaga?
Caawimo weydiiso qof saaxiib ama qaraabo ah kaas oo ku hagi doona markaad wareejinta ka bilaabeyso bogga internedka ee Danske Banks webbplats. Waxa taageero dheeri ah lagu heli karaa haggeyaal luqado kala duduwan ku qoran.
Haddii aad wali caawimo u sii baahan tahay, ayaad ku soo dhawaan kartaa inaad HSB kula soo xiriirto telefoon ama emayl ahaan. Sababo la xiriira, covid-19 dartood ayaan qaar badan oo xafiisyadayada ka mid ah aan la booqan karrin. Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaadka xiriirka ee HSB gobolkaaga.
Sidee ayaan u wareejin karaa xisaabtayda dhigaalka guriga anoon? Hämta
Su'aalaha badanka la iswaydiiyo ee ku saabsan wareejinta xisaabaha dhigaalka guriga Hämta
Keydsiga cusub ee HSB – isbedelada ugu waaweyn:
Toban ilaa laba iyo toban sanduuqa saamiga hantida oo la kala doordoorna karro, marka la garab dhigo labadii markii hore jiray.
Khataraha iyo kharashaadka sanduuqyada saamiga hantida oo aad u kala duduwan, si laguugu suurtogaliyo inaad doorato sanduuqa saamiga hantida ee ku salysan baahidaaad.
Dhamaan sanduuqyada saamiga hantidu waxay yeelan doonaan astaan waaritaan, qaarkood waxa saaran shuruud adag oo dheeri ah oo ay tahay inay buuxiyaan.
Shuruudaha dulsaarka/ribadda ee HSB Bosparkonto oo laga sii wanaajiyey.
Fursada aad ku helayso aqoon dheeraad ah oo ku saabsan keydsigaaga adigoo aad heli doonto macluumaad gaar ah oo loogu talogalay kooxda loo danleeyahay.
Lacagta u keydinta hoyga ee HSB waxa si wadajir ah loogu soo bandhigayaa iyadoo ay la socoto koonto uu bangi ka baxsani maamulo. Sida waafaqsan go'aanka Riksgälden ayaa HSB Bosparkonto iyo HSB Fasträntekonto qeyb ka yihiin dammaanad qaadista deebaajiga ee dawladda. Macaamiil kasta wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo magdhow iskugeynta hadhaaga koontadiia bangi ku jirta ee u dhigma ugu badnaan 100 000 EURO. waxay Riksgälden magdhowga bixinaysaa muddo 7 maalmaha shaqo gudahood ah laga bilaabo maalinta bangigu uu kaco ama Hey'adda kantaroosha maaliyadda (Finansinspektionen) ay go'aansato in dammaanad qaadku uu shaqeeyo.
Miyaad qabtaa su'aalo ku sabsan bedelidda bangiga? Wax dheeraad ah ka akhri qeybta su'aalaha iyo jawaabaha hoostooda ama ku soo dhawow inaad anaga nala soo xidhiidho.
Macuumaadka xiriirka waxaad ka helaysaa.